mars 2017 - Page 70 sur 70 -
01/03/2017 admintriatra 0
Tsy nitsitsy fitenenana ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina mikasika ny fandikan-dalàna eto amin’ny firenena. Hentitra izy nanambara fa “tsy misy ambonin’ny lalàna izany eto amin’ny tany sy ny firenena. Ny lalàna natao ho an’ny rehetra …Tohiny
Nivoatra ny toe-draharaha. Mila ny marina momba an’iny raharaha Befandriana Avaratra iny koa ny filoham-pirenena, fa tsy ny mpiaro ny zon’olombelona ihany akory. Niditra an-tsehatra ankehitriny ny “komity mpanadihady” hanao ny fanadihadiana momba io raharaha …Tohiny